UKUTHUMELA KUNYE NEMIGAQO-NKQUBO YOKU-ODOLA | INGCACISO - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato Ukuthumela kunye neMigaqo-nkqubo yoku-odola
I-FYI: Ukuba ukuhambisa iodolo yakho nge-USPS, kungathatha ixesha elincinci ukufikelela kuwe ngenxa yolibaziseko lokuhanjiswa kwe-USPS.
Ukwenziwa kwe-odolo kunye nokuHanjiswa
Iqela lethu alinakulinda ukuthumela iiprinta zakho ezintle. I-odolo yakho iya kuprintwa kwaye ithunyelwe ngaphakathi kweentsuku ezine zeshishini (iintsuku zeshishini ezintandathu kwiincwadi zeendwendwe) ukusuka kwindawo yethu yokuprinta e-Utah. Siqokelela iiodolo, ke ukuba uya-odole incwadi yeendwendwe kunye nezinye izinto, siza kuyithumela yonke iodolo yakho kunye kwiintsuku ezintandathu zomsebenzi.
Siyavuya ukunikezela ngenqanaba lokuhambisa ngenqanawa kuzo zonke iidilesi zase-US. Ukuhanjiswa kwamanye amazwe akufumaneki ngeli xesha. Amaxesha oguquko ayahluka ngokuxhomekeka kwindlela oyikhethileyo yokuthumela:
Imeyile ephambili ye-USPS-Uqikelelo lonikezelo kwisithuba seentsuku ezisixhenxe zomsebenzi
unikela ntoni kwisikhumbuzo seminyaka engama-50 somtshato
Imeyile ye-USPS Express-Ukuhanjiswa okuqikelelweyo kwiintsuku ezi-6 zomsebenzi
Inqanaba elinye leFedExUkuhanjiswa okuqikelelweyo kwiintsuku ezi-6 zomsebenzi
Nceda uqaphele: Ii-odolo zokuthumela kwi-P.O. Ibhokisi okanye idilesi ebekwe eAlaska okanye eHawaii iyakuthunyelwa ngeFedEx Ground enokuthatha ukuya kwiintsuku ezili-11 zeshishini.
Iikeyiki zomtshato ezi-2 ezilula
Ubusuku obuqhelekileyo be-FedEx-Uqikelelo lonikezelo kwiintsuku ezi-5 zomsebenzi
Nceda uqaphele: Ii-odolo zokuthumela ngenqanawa ngeFedEx Standard Overnight ayinakho ukuhanjiswa kude kube lusuku olulandelayo lweshishini ukuba zithunyelwe ngolwesiHlanu.
Asinakuqinisekisa amaxesha okuhambisa, ke nceda uzame ukuvumela ixesha elongezelelweyo lokuhanjiswa ukuba ufuna iodolo yakho ngomhla othile.
Nceda uqaphele: Ukuba iodolo yakho ibandakanya amanqaku oyilo, ukushicilelwa kwedilesi yeendwendwe okanye amakhadi endawo, iqela lethu loyilo liya kufikelela kuwe nge-imeyile ukugqibezela iodolo yakho. Amaxesha otshintsho kunye nokuhanjiswa kuya kuqala wakube unike imvume yokuprinta.
Ngaba u-odole isampulu yepakethi? Sithumela abo nge-imeyile yeklasi yokuqala ye-USPS, ethi ibonelele ngefestile yesiqhelo yokuhanjiswa kweeveki ezi-1-2. Ngelishwa, ukulandelela iodolo akufumaneki ngale nkonzo.
Ukuprinta kuqala kungekudala emva kokubekwa kweodolo yakho. Ngaba ufuna ukwenza utshintsho? Sitsalele umnxeba nge-ASAP apha (800) 443-5289 kwaye iqela lethu liya kukwazisa ukuba kunokwenzeka.
Sele uyifumene iodolo yakho? Nceda unxibelelane nathi kwiintsuku ezili-14 zokufumana iphakheji yakho. Siza kusebenza nawe siphinde siprinte kwaye sithumele iodolo yakho ngendlela yendlela yokuqala yokuhambisa. Ukuba iodolo yakho iqulethe itypo evunyiweyo ngexesha lenkqubo yokuphuma okanye ngelixa usebenza nomyili, sonwabile ukukunika ushicilelo olunesaphulelo.
Njengoko uyila izinto zokubhala, khumbula ukuba imbonakalo yedijithali eyi-80% ukuya kwi-90% ichanekile ekumeleni imibala, kunye nolwahluko olululo phakathi kobungqina bedijithali kunye nokuprinta kulindelwe. Ukuba umbala wamakhadi akho aprintiweyo awuhambelani nesampulu yakho eprintiweyo okanye iitshathi zemibala (ezibandakanyiweyo neesampulu zethu), nceda unxibelelane nathi malunga nokuprintwa kwakhona. Ukuba ungathanda ukuhlela kwakhona amakhadi akho ngombala owahlukileyo, singavuya ukukunika ushicilelo olunesaphulelo.
Xa kuziwa ekushicileleni iifoto, umgangatho weprints zakho uxhomekeke kumgangatho wefoto engenisiweyo. Zive ukhululekile ukufikelela kuthi ngayo nayiphi na imibuzo malunga nokuba ifoto yakho iza kuprinta njani-sonwabile ukunceda! Njengoko uyila izinto zokubhala, khumbula ukuba imbonakalo yedijithali eyi-80% ukuya kwi-90% ichanekile ekumeleni imibala, kunye nolwahluko olululo phakathi kobungqina bedijithali kunye nokuprinta kulindelwe. Isixhobo sethu sobuqu siya kukwazisa ukuba isisombululo sakho sefoto singaphantsi kwama-300 dpi. Asikwazi ukukhupha ukuprintwa kwakhona okanye ukubuyiselwa kwemali yee-odolo eziqulethe ukuvusa isilumkiso, iifoto zesisombululo esisezantsi.
Ukuprintwa kunye nokubuyiselwa kwemali
Injongo yethu kukusoloko sinika into engenasiphako, eyonwabisayo. Kuba zonke izinto zokubhala zishicilelwe ngokwesiko kwi-odolo, iifom azamkelwa. Nangona kunjalo, ukuphinda kushicilelwe kuyafumaneka kwimeko enqabileyo yokuba umba wokushicilela uchaphazele iodolo yakho.
Ngaba ufuna ukucela ukuphinda ushicilelwe? Fikelela kwi [imeyile ekhuselweyo] ASAP ngolu lwazi lulandelayo:
Inombolo yakho ye-oda enamanani asixhenxe (ibekwe kwirisithi yakho ye-imeyile okanye kwimbali yeakhawunti yeakhawunti yakho)
Inkcazo emfutshane ngalo mbandela
Iifoto ezibonisa umba, zithathwe ekukhanyeni kwendalo ukuba kunokwenzeka
Ifoto yesiliphu sakho sokupakisha
Ukuba ukhetha ukufikelela kwifowuni okanye nge-imeyile
Mfutshane ngexesha? Sinokunika ukubuyiselwa kwemali endaweni yakho ukuba ucelwe ukuba uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde kwisithuba seentsuku ezintlanu zomtshato wakho.
Dinga uncedo? Silapha ngenxa yakho. Fikelela kwi [imeyile ekhuselweyo] okanye utsalele umnxeba (800) 443-5289.
indlela yokubopha imimoya enye
Umahluko phakathi kwesicakakazi kunye nematriki yozuko
iingoma zokuhamba ezantsi apha ku-2016
indawo yokuhlala echibini lomlambo
Kufuneka ube noluhlu lweefoto zomtshato